Promotion | Nomad Telecom
Kusoo dhawow shirkadda Nomadtel oo shirkad ku caan baxdey in ay bixiso adeegyo kala duwan oo tayo leh raqiisna ah. Nomadtel waxaa lagu bartey in ay bixiso adeegga VOIP-ka loo yaqaano ama telefoonada internet-ka laga dhex dirsado. Nomadtel waxay kuu fududeyneysaa sidii aad si sahlan ugula xiriiri lahayd ehelkaaga ama inta aad shaqada wadaagtaanba. Waxaa kale oo shirkaddaan Nomadtel lagu bartey in ay tixgelin iyo qaymeyn gaar ah siiso macaamiisheeda kala duwan. Waxa ayna shirkadu ku takhasustey in ay si deg deg ah u fuliso codsiyada kala duwan ee macaamiisha oo aad adiguba ka midtahay. Si sahlan ayaad u isticmaali kartaa Nomad Telecom services markasta iyo meelkasta oo aad aduunka ka joogtaba. Hadaba ka faa’iideysi wacan. Service yada kala duwan oo aay Nomad Telecom idiin diyaarisay.
Adeegan waa mid casri ah aadna u sahlan oo aay ka faa’iideysan karaan macaamiisheena Kenya. Mobile kaaga ayaa waxaa laguu dulsaarayaa Number UK, Canada ama Mareykan ah kaas oo lagaaga soo wici karo sida oo joogo wadamadaas iyada oo aan waxba laga bedelin Mobile kaaga iyo Numberkiisa intaba. Mobile kaaga u isticmaal in lagaa soo wici karo aduunka oo dhan lacag la’aan adiga oo gurigaaga jooga.
Nomad Telecom Pc2phone waa adeeg kuu sahlaya in aad wici karto meeshii aad aduunka ka doonto adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada. Adeegan waa adeeg casri ah misna aad u raqiis ah adiga oo isticmaali kara meelkasta oo aad aduunka ka joogto. Waxa aadna ku wici kartaa Africa, Yurub, Asia iyo America ba.
Mobile Dialer aad u sahlan oo aad kula xirriiri karto aduunka meeshii aad ka doonto. Adeegan waxaa kuu sahlay shirkada Nomad Telecom. Adeegan waxa uu kuu qaban karaa in aad ka wici karto aduunka meeshii aad ka doonto adigana lagaa soo wici karo. Tusaale hadii aad dooneyso in lagu soo waco waxa aad qiimo aad u jaban ku heli kartaa Number lagaa soo wici karo sida Number USA, Canada ama UK ah kaas oo laguu soo wici karo sida adiga oo jooga wadamadaas.
NOMAD RESELLER SERVICE
Ma dooneysaa in aad faaiido sameyso adiga oo aan waqti badan iyo lacag badani kaa bixin oo gurigaaga ama goobtaata shaqada jooga? Hadaba Nomad Telecom waxa ku siineysaa Reseller Service kaas oo aad dib isii gedi karto adeegyada faraha badan ee shirkadu bixiso. Adeegyada shirkada bixiso waxaa ka mid ah Calling Cards, Mobile Dailer, Pc2phone, Callshop iyo kuwo kale oo fara badan kuwaas oo dhamaantood wada ah adeegyo telefoon.
Ma dooneysaa inaaad hesho kaar ama Calling card aad u raqiis ah oo aad kula xarriiri karto aduunka oo dhan adiga oo isticmaalaya Mobile kaagaama Telephone kaaga guriga. Nomad Telecom Calling cards waxa uu ka mid yahay Calling card yada ugu raqiisan uguna tayada wanaagsan ee la isticmaalo adiga oo ka heli karana kuna isticmaali kara meelkasta oo aad aduunka ka joogto.
Hadii aad leedahay voip Swtich oo aad u baahantahay Termination Nomad Telecom waxa aad ka heli kartaa Termination wadankasta ah sida Somalia, Ethiopia iyo Kenya.